Kazakh ịnyịnya: nkọwa, ụdị (adaev, agba), foto - Anumanu - 2020
Kazakh ịnyịnya ibu
Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na ịnyịnya mbụ ndị mmadụ na-agba ọsọ si n'aka ndị isi Kazakh. E nwekwara okwu ndị na-ewu ewu ndị Kazakhs ụmụaka na-amụta ịnya ịnyịnya tupu ha ejee ije, enyi ha kachasị mma n'etiti anụmanụ abụghị nkịta, kama ọ bụ ịnyịnya. Ya mere, ọ bara uru ịṅa ntị n'ìgwè ịnyịnya nke Kazakh, nke anyị ga-eme n'isiokwu ahụ, na-atụle akụkọ ihe mere eme ha, ụdị, atụmatụ nke ngwa ngwa na nlekọta.
Mpụ na agwa
Adaev (ịnyịnya ibu)
Ọnọdụ njide na nlekọta
Ihe kachasị ewu ewu na nkà mmụta sayensị banyere mmalite nke ịnyịnya ibu mbụ ahụ bụ mbipụta na nke mbụ a na-azụ anụ ndị a na steeti Kazakh.
M uta otu esi ahọrọ onwe gi.
O mere ihe karịrị otu puku afọ BC, e mechakwara ịnyịnya nke Kazak na nke oge ya ihe dịka puku afọ gara aga. Akụkụ ndị e ji mara ya bụ ihe dị ịrịba ama na-enweghị atụ na ọnọdụ njide na ntụgharị. Ịnyịnya Kazak dị mma dị ka ịnyịnya, na dịka mkpọ, na anụ na mmiri ara ehi. Ma ụwa a nwere akụkụ nke ọzọ, n'ihi na, na-egosipụta ịrụ ọrụ ọma mgbe nile na mpaghara dị iche iche nke ngwa ya, onye nnọchianya nke ìgwè Kazakh apụghị igosi nsonaazụ dị mma na mpaghara ndị a.
Ị ma? Site n'enyemaka nke ịnya ịnya, ọ bụghị naanị ịmepụta ngwongwo mgbagwoju anya na echiche nke nguzozi, kamakwa normalize ọbara mgbali elu na ala nke usoro ụjọ ahụ. Ọzọkwa, e nwere ihe ọmụma banyere ịmepụ nsogbu nsogbu mgbagwoju anya site na nkwurịta okwu na ịnyịnya.
Echere otu ịnyịnya nke dị obere, ma ọ bụ iwu siri ike. Ná nkezi, ọ dị ka nke a:
elu na-akpọnwụ - 1.32-1.38 m;
ogologo uhie - 1.42 m;
obi girth - 1.56-1.64 m;
arọ - ruo kilogram 360;
isi buru ibu ya na profaịlụ ziri ezi ma o bu ihe omuma;
n'olu olu na ala ogologo;
azụ dị ogologo ma kwụ ọtọ;
ọkpụkpụ ahụ dị mma ma gbasaa;
croup gburugburu ma dịtụ drooping;
obi dị ike na n'obosara;
ụkwụ dị mkpụmkpụ;
gbaa akpụ akpụ;
Anụ ahụ dị oke;
ihe ndị ahụ - e nwere ihe dị ka narị atọ dị iche iche, mana ọ na-ahụkarị mmiri na uhie.
Ụdị nke anụmanụ a bụ ihe dị iche: ọ bụ obi ike, kemgwucha na ihe dị mma, ma ọ na-abụkarị onye nwere ike ịghọ onye na-asọ oyi, na-eme ihe niile na-emegide onye nwe ya. Otú ọ dị, site n'ịnọgide na-enwe ndidi n'ebe mmadụ nọ, ịnyịnya nke Kazak n'ọtụtụ ọnọdụ na-aghọ anụmanụ na-erube isi.
Dika ihe n 'aka oru n' ajuju, na njedebe, uzo abuo nke Kazakh biara: Adaevskaya na Dzhaba.
Ị ma? N'ozuzu, ihe dị ka nde 60 nke ịnyịnya, tinyere anụ ọhịa, bi ugbu a n'ụwa.
N'oge a na-azụlite, ụdị ụmụ Bekee ahụ nwere mmetụta dị ukwuu nke ụdị a, nke mere ka ọ nweta àgwà ọma nke ịnyịnya. N'ịbụ nke dị elu nke 1.45 m mgbe akpọnwụọ, Adaev nwere usoro iwu doro anya na obi ụtọ. N'anya, ọ na - ele anya n'olu atọ ya - agba ọcha, ọlaedo ma ọ bụ n'ọnụ mmiri.
Ugbua ala a, nke nwere elu na nrocha nke nani 1.4 m, ka esi na-agafe na Don trotters, nweta ihe di nma karia, ma o bu anu ndi siri ike, na-atachi obi obuna onodu nke oke onodu uzo.
Ebe ọ bụ na a na-ekezi ịnyịnya ịnyịnya nke Kazak na ụdị abụọ dị iche iche, akụkụ ha nke ngwa dị iche. Adaev, na-egosipụta ezi àgwà nke ịnyịnya, na-eji tumadi maka ịnya na na agbụrụ. A zụrụ ya nke ọma ma hụ nnukwu ebea ma ọ bụ racetrack.
A na-eji Jaba eme ihe dị ka onye ọrụ na obere ugbo, nakwa dị ka anụmanụ na-arụpụta anụ maka anụ ụlọ na ụlọ ọrụ ara ehi, na-ebu ibu ruru 480 kg. Igbu mkpụrụ nwere ike iru 60%, mmiri ara ehi na-eru kwa kilogram 10 kwa ụbọchị. N'otu oge ahụ, àgwà ọma nke anụ bekee, n'adịghị ka ụdị ịnyịnya ndị ọzọ, dị elu.
Ọ dị mkpa! Bangs na isi nke anụ ahụ ekwesịghị ịdị elu n'okpuru anya nke anya, ka ọ ghara imebi ihe ọhụhụ ya.
Ihe kachasị dị iche iche nke ịnyịnya nke Kazakh bụ oké ntachi obi nke ụmụ anụmanụ ndị a na njedebe ha iji lekọta ha nke ọma. N'ịbụ ndị na-agagharị oge ruo ogologo oge, ndị Kazakh ahụ echeghị echiche banyere ihe siri ike maka ịnyịnya ha, ma ọ bụ banyere ịchọta nri maka ha. A na-agba ịnyịnya ndị ahụ n'ìgwè ehi niile n'afọ nile n'èzí ma nwee afọ ojuju na ebe ịta nri, wepụtakwara ya site na snow. Ihe niile a na-agbanye n'ụdị anụ ahụ ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị anyị. Taa, jabas nwere ike iguzogide ntu oyi ruo -40 Celsius C: ọ bụrụ na a na-echekwa ha, ọ bụghị naanị na-enweghị ọkụ, mana na-enweghị ihe mkpuchi ọ bụla. Adaevskie ịnyịnya nwere ntakịrị obi ọmịiko ma nwee ike ịnọ n'ime ihe ndị ahụ siri ike, ma ọ bụ naanị chebe ya site na drafts na ntakịrị ihe a gwara mmanụ, na-enweghị ihe ọ bụla ọkụ. Maka nkpa ụkwụ, akụkụ a dị mkpa nke ahụ ịnyịnya, n'ihi ịgagharị na-agakarị n'ebe nkume dị ukwuu na steeti Kazakh nke dị n'ebe ndịda, enwewo ike siri ike na ọ dịghị mkpa ịnya ịnyịnya.
Ọ dị mkpa! N'ọnọdụ ọ bụla nke nkwurịta okwu na ịnyịnya, ọ bụrụ na ọ bụghị ikpe, mmadụ ga-anọ n'azụ ya.
Otú ọ dị, nke a adịghị echedo onye nwe ya ka ọ ghara ihichapụ mkpịsị ụkwụ, nke a ga-eme mgbe nile site n'enyemaka nke nko na ahịhịa. Akụkụ ọzọ nke ìgwè a bụ ajị ajị anụ, nke dị n'oge oyi ma na-azọpụta ụmụ anụmanụ site na oké frosts. N'ihi na nlekọta ya jiri ejiji omenala, brushes, sponges na mittens ákwà. Karịsịa, ịnyịnya ndị Adaev na-elegharị anya aji, mane na ọdụ, ebe ọ bụ na ọmarịcha ihe ịchọ mma ndị a. Jaba adịghị edozi nlekọta dị otú ahụ.
Ndị ịnyịnya nke ìgwè a na-enwe obi ụtọ ịzụta ahịhịa n'ụdị ọ bụla, ebe ọ bụ na kemgbe ọtụtụ puku afọ, ndị nna nna ha maara na ha na-eri oge oyi na ihe ndị ahụ dị egwu nke ahịhịa kpọrọ nkụ na ha ga-ewepụta mkpịsị ụkwụ ha n'okpuru snow. N'ihi ya, ndị hay na-egbukarị maka oyi bụ nri dị mma maka anụmanụ ndị a, na ọka, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi bụ ihe oriri maka ha. A na-ekesa ìgwè ịnyịnya nke Kazakh n'èzí ebe ha bi. Ụmụ anụmanụ ndị na-etolite n'okpuru ọnọdụ nke ndị Kazakh steppes na ndị na-eme ha na-egosipụta onwe ha nke ọma n'ime ha, ma ha anaghị egosi nsonaazụ dị mma nke ndị na-azụ ịnyịnya na gburugburu ụwa na-atụ anya n'aka anụ ụlọ ha. Ka o sina dị, iji meziwanye ụdị ọ bụla, na-eme ka mkpụrụ ndụ nke ntachi obi na ike dị n'ime ya, ịnyịnya ndị Kazak dị nnọọ mma.